Udinga Abameli Abaphezulu Bobugebengu eDubai UKUZE UWINE ICALA LAKHO? Kulula!!!
Udinga Abameli Abaphezulu Bobugebengu eDubai ukuze Bawine Icala Lakho?
Unekhono futhi unolwazi
Ukubhekana namacala obugebengu e-Dubai, i-UAE kungaba yinto embi kakhulu. Uma usolwa ngobugebengu obubucayi futhi ungathathi iseluleko sommeli omuhle wokuvikela ubugebengu e-Dubai, kuzodingeka ukhokhe izinhlawulo eziqinile noma ungase ubhekane nokuboshwa. Ngakho-ke, ukufuna usizo lommeli okhethekile wobugebengu kuwumqondo omuhle. Sishayele manje ukuze uthole i ukuqokwa okuphuthumayo at + 971506531334 + 971558018669
Izinsizakalo Zethu Zomthetho Wobugebengu, Imisebenzi Nezibopho
Ukumelwa Kwezomthetho Kwezobugebengu
Abameli bobugebengu baqeqeshelwe ukunikeza iseluleko sezomthetho ngezihloko ezahlukahlukene. Lokhu kuhlanganisa yonke into esuka izindaba zenqubo, njengokuthi ungasingathwa kanjani icala lakho noma yimiphi imibuzo okufanele uyibuze ijaji, ukuze likunikeze ukuqonda mayelana nezinketho zakho nokuthi yini engase yenzeke ngokusekelwe emiphumeleni ehlukene engase ibe khona. Bangakunikeza imininingwane yokuthi wenzeni uma uboshiwe, uzothini emaphoyiseni, nokunye.
Ibheyili kanye Nezikhalazo
Simelela amaklayenti ku izikhalazo futhi izicelo zebheyili kanye nokulalelwa kwesicelo sebheyili, phakathi kokunye ukulalelwa nokuvunyelwa kwangaphambi nangemuva kwecala. Siyasiza ekuthumeleni amamemorandamu asemthethweni nezinye izicelo zokusiza amakhasimende ukuthi athole ibheyili.
Abameli bobugebengu bangakusiza ekuqhubekiseni uhlelo lwakho uphenyo endaweni yakho. Lokhu kungabandakanya ukuqoqa ubufakazi, njengezitatimende zofakazi noma okunye okungaba usizo phakathi nokuqulwa kwecala. Bangase futhi bakusize ulungiselele noma yiziphi izingxoxo nezikhulu zomthetho.
Ukuphatha Izokuxhumana Nezinkantolo
Abameli bobugebengu nabo bayanakekela konke ukuxhumana phakathi kwamakhasimende abo kanye nenkantolo. Lokhu kuhlanganisa ukwenza isiqiniseko sokuthi zonke izinsuku eziwumnqamulajuqu ziyafinyelelwa, ukugcwalisa noma yimaphi amaphepha adingekayo, kanye nokuqinisekisa ukuthi noma yikuphi ukuvela enkantolo kuyahlelwa. Uma kukhona ukuqulwa kwecala noma ukulalelwa, abameli bobugebengu bangaphikisana enkantolo egameni lamakhasimende abo. Bangaphinde banikeze izeluleko nokuqeqesha ukuze bakusize ulungiselele ukuqulwa kwecala.
Ukulungiselela Izicelo kanye namafuphi
Abameli bobugebengu nabo uhlaka lwememorandamu, izicelo, kanye nezifinyezo zamakhasimende abo. Lokhu kuhlanganisa iziphakamiso, izincwadi, namanye amadokhumenti ahlobene necala. Bangase futhi bafake la maphepha enkantolo egameni lamakhasimende abo.
Ukuvimbela Amacala Ekugcwalisweni
Ngokuvamile, kuthatha isikhathi phakathi kokuboshwa nokufakwa kwamacala. Ummeli/ummeli onekhono angasebenzisa leli qiniso futhi khuluma namaphoyisa noma abashushisi (Ummeli Wesifunda), ethula izitatimende kanye nobufakazi obufakazela ubumsulwa bosulu “osolwayo”. Ezimeni lapho amacala kufanele afakwe khona, kungenziwa isicelo sokunciphisa amacala. Isib. Isenzo esingalungile esikhundleni sobugebengu.
Abameli bobugebengu iDubai nabo benza njenge abameli kumakhasimende abo. Lokhu kusho bona vikela izithakazelo zabo nokuqinisekisa ukuthi baphathwa ngendlela efanele. Lokhu kuhlanganisa ukuhlonipha amalungelo abo kanye nokuthola umphumela omuhle kakhulu ecaleni labo.
Abameli bobugebengu nabo bayahlinzeka isevisi yomphakathi kumakhasimende abo ezimweni eziningi. Lokhu kungabandakanya ukuhlinzeka ngemfundo ngomthetho, ukusebenza nezisulu, noma ukuqondisa abantu abasha.
Izeluleko Zekhasimende Eziqhubekayo Nokwesekwa
Sihlinzeka ngezimo umthetho wezobugebengu amasevisi kumakhasimende ethu kuyilapho siqinisekisa ukuthi abameli bethu bomthetho wobugebengu banjalo ocingweni futhi iyatholakala eziphuthumayo.
Ukumela Amaklayenti Ekuqulweni Kwamacala noma Ukulalelwa Kwenkantolo
Indawo yokugcina lapho abameli bethu bobugebengu e-UAE behlinzeka khona ukwesekwa kusephakathi ukuqulwa kwecala noma ukuqulwa kwecala. Bazosebenza njengabeluleki bezomthetho kumakhasimende abo ngesikhathi sokuqulwa kwecala futhi bawasize ekulungiseleleni. Uma inkantolo ivuma, ummeli wezobulungiswa bobugebengu uzobuza ofakazi, enze izitatimende zokuvula, ethule ubufakazi, futhi aphendule imibuzo.
Noma ngabe amacala akho obugebengu awokwephula okuncane noma ubugebengu obukhulu, usengozini yokujeziswa kanzima uma utholwa unecala. Izijeziso ezingase zibe khona zihlanganisa izinhlawulo zentambo, ukuboshwa udilikajele, izigwebo zejele ezishiwo, ilungelo lokugcinwa yinkantolo, izinhlawulo zenkantolo, nezijeziso. Ngaphandle kwale miphumela engaba nzima, Umthetho wobugebengu wase-UAE kuyinkimbinkimbi, futhi a onamakhono umthetho wobugebengu e-Dubai ungase ube umehluko phakathi kwenkululeko nokuboshwa noma inhlawulo yemali eshisiwe kanye nencane kakhulu.
Njengoba i-UAE idonsa iningi lezinhlinzeko zayo kuMthetho we-Islamic Sharia, umthetho wobugebengu we-UAE uyinkimbinkimbi ngokwemvelo. Ungase udinge ummeli onekhono nonolwazi lomthetho wobugebengu wase-Dubai ukuze akusize uzulazule enqubweni yomthetho wobugebengu eyinkimbinkimbi. Ngolwazi lwabo olujulile ngomthetho wenhlangano ye-UAE kanye noMthetho we-Islamic Sharia, abameli bethu bomthetho wobugebengu base-Dubai banedumela lokuzuza izinqumo zenkantolo ezivuna amakhasimende. Njengethimba lezomthetho elixube izigwegwe eziningi, siphathe zonke izinhlobo zamacala obugebengu futhi siphakathi kwabeluleki bezomthetho abangcono kakhulu kanye nabameli abasezingeni eliphezulu bokuvikela ubugebengu e-Abu Dhabi nase-Dubai.
Abameli nabameli be-Emirati ne-UAE abanamalungelo aphelele ezithameli
Sinabameli Bendawo base-Emirati kanye ne-UAE e-Dubai. Ithimba lethu liqukethe Abameli baseGibhithe, amaNdiya, amaFulentshi, isiRashiya, amaPheresiya, amaShayina kanye nabaseCanada onolwazi lweminyaka yomthetho wobugebengu. Abameli bethu bokuvikela ubugebengu e-UAE bavikele ngempumelelo amakhasimende amaningi asolwa ngezinhlobonhlobo zobugebengu e-UAE.
Abameli bethu e-UAE banakho amalungelo aphelele ezethameli kuzo zonke izinkantolo ze-UAE nezinkantolo. Sinolwazi olungenakuqhathaniswa nolwazi lokuphatha zonke izinhlobo zobugebengu, ama-misdemeanors kanye namacala ngaphambi Kwezinkantolo Zobugebengu kanye Neziteshi Zamaphoyisa e-Dubai nanoma iyiphi indawo ye-UAE.
Uma use-Dubai noma i-UAE ebanzi, futhi wena noma othandekayo uboshiwe noma ubhekene namacala obugebengu, xhumana nathi ukuze uthole ukumelwa okusebenzayo okusemthethweni. Thina isiqinisekiso sobumfihlo njengoba thina fight ngamalungelo akho ngenkathi unikeza isiqondiso nokusekelwa kuzo zonke izinketho zakho ezingokomthetho.
Siyazi ukuthi zonke izimo zihlukile futhi zibalulekile, futhi asisebenzisi indlela evamile yazo zonke izimo. Sisebenzisa indlela ye-empirical futhi sisebenzisa uchwepheshe ukuhunyushwa kwamakhodi.
We yenza ngokwezifiso izinkonzo zethu ngokomuntu ozidingayo, ngokusekelwe emibhalweni yamakhasimende ethu kanye nalokho akulindele. Siyiqembu labameli abazinikele kanye nabeluleki bezomthetho. Sihlinzeka amakhasimende ethu ngezinsizakalo zomthetho wezobugebengu ezisezingeni eliphezulu nezeluleko ezinhlobonhlobo zezinkinga zomthetho.
Umthetho wakho ukubonisana nathi izosisiza siqonde isimo sakho nezinto ezikukhathazayo. Uma wena noma othandekayo nibhekene namacala obugebengu e-UAE, singasiza. Xhumana nathi ukuze uhlele umhlangano. Sinabameli bobugebengu abahamba phambili eDubai ukukusiza.
Umthetho Wobugebengu wase-United Arab Emirates
The I-United Arab Emirates (UAE) iyizwe laseNtshonalanga ye-Asia emaphethelweni aseningizimu-mpumalanga ye-Arabian Peninsula e-Persian Gulf. Inqamula i-Oman empumalanga, iSaudi Arabia eningizimu, futhi yabelana ngemingcele yayo yolwandle neQatar ne-Iran. Dubai, isizinda se-UAE nedolobha elikhulu kunawo wonke, futhi likhulu kunawo wonke esifundeni sonke saseMpumalanga Ephakathi.
Njengezinye izifunda zaseMpumalanga Ephakathi, i Ikhodi yenhlawulo ye-UAE ithola iningi lezakhi zayo ku- Umthetho we-Islamic Sharia, nezwe lisebenzisa umthetho we-Sharia ezimeni ezithile. Njengomthetho osekelwe enkolweni kanye nendlela yokuphila yamaSulumane, umthetho weSharia noma umthetho wamaSulumane uyinkimbinkimbi, ikakhulukazi ezincazelweni zawo zobugebengu.
Ngokunjalo, abameli bobugebengu e-UAE kumele babe nomyalo oqinile nokuqonda umthetho we-Islamic Sharia ukuze bavikele amakhasimende abo enkantolo ngempumelelo. Njengoba inkantolo ichitha izimpikiswano ezizwakalayo lapho ummeli wenkantolo yobugebengu ayikhulumi neSharia Law, isidingo sokuba nekhono emthethweni asinakugcizelelwa ngokweqile.
Izinhlobo Zobugebengu e-Dubai, e-UAE
Sinikeza ummeli ochwepheshe futhi amasevisi abeluleki bezomthetho ngaphesheya kwe-UAE, okuhlanganisa i-Dubai, i-Abu Dhabi, i-Ajman, i-Sharjah, i-Fujairah, i-RAK, ne-Umm al Quwain. Uma ubhekene amacala obugebengu e-Dubai noma kwenye indawo e-UAE, ungathembela kwabanekhono futhi abameli bobugebengu base-Emirati abanolwazi eDubai ukuze sikuvikele enkantolo.
Ukuze ubike ubugebengu e-Dubai noma e-UAE, funda umhlahlandlela ngomthetho wobugebengu wase-UAE.
Sinolwazi olubanzi lokuvikela amakhasimende ezindaweni eziningi zomthetho wobugebengu, okuhlanganisa nalokhu okulandelayo:
Ukudlwengula Nokunukubezwa Ngokocansi
Ukubulala noma Udlame
I-White Collar Crimes
Indlela Abameli Abalinqoba Ngayo Icala Lobugebengu - Amasu Angcono Kakhulu Abameli Bezokuvikela Ubugebengu:
Awufuni ukungena enkantolo ungalungiselelanga uma ubhekene necala icala lobugebengu. Ngokuvamile, abantu abaningi balahlekelwa amacala abo ngenxa yokuthi kunjalo engazi yabo amalungelo ezomthetho noma inqubo yenkantolo engalungile. A ummeli wokuvikela ubugebengu isebenza njengomugqa wakho wokuqala wokuzivikela ngenkathi isiza ukuvikela amalungelo akho omthetho.
Ngokuvamile, umthwalo wobufakazi kunoma iyiphi icala lobugebengu uhlala no ukushushiswa. Umshushisi kufanele aveze ubufakazi “ngaphandle kokungabaza” ukuthi ummangalelwa is unecala. Ngokuvumelana nalokho, oqokiwe ummeli noma ummeli udinga isinyathelo esisodwa ngaphambi kokushushiswa. I abameli bezokuvikela abahamba phambili sebenzisa isipiliyoni seminyaka ukuze uhlaziye icala, okuhlanganisa amandla kanye nobuthakathaka bobufakazi obutholakalayo.
Ummeli ovikela ubugebengu uyobe esethuthukisa a isu lokuzivikela lokho kuholela ekukhokhisweni okuncane noma ekukhululweni. Isu elihle lokuzivikela lifuna ukuveza ummangalelwa njengomuntu olungile futhi ngendlela engcono kakhulu.
Uma ubhekene namacala obugebengu noma uphenywa ngobugebengu e-Dubai noma e-UAE yonkana, ungakhathazeki. Abameli bethu bokuvikela ubugebengu base-UAE abasezingeni eliphezulu ube namasu angcono kakhulu okuvikela umthetho ukusiza ukuvikela amalungelo akho futhi unciphise imiphumela yokugwetshwa.
Indlela Yokulwa Noma Ukuvikela Emacaleni Obugebengu? Amanye Amasu Ajwayelekile Okuvikela Ubugebengu Afaka:
1. Ukuphenya Amacala Obugebengu Obekwe Wena
Ummeli/ummeli okhuthele wokuvikela ubugebengu uzophenya wonke amacala obugebengu asolwa ngawo, okuhlanganisa nokucela ubufakazi kubaphenyi uma kukhona ukushayisana. Ngokuvamile, umshushisi kufanele afakazele icala lobugebengu ngaphandle kokungabaza. Ummeli ophezulu wokuvikela ubugebengu angasebenzisa uphenyo ukuze khanyisa izikhala, ukungahambisani nokungahambisani ezingxoxweni 'zobufakazi' bomshushisi njengesu lokuzivikela.
2. Ukuhlolisisa ukuziphatha kwesikhulu esibophayo
Njengabantu, amaphoyisa ajwayele ukwenza amaphutha ngesikhathi eboshwa. Empeleni, ukuziphatha kwesikhulu kanye nezimo zokuboshwa kwakho kungaba izizathu ezanele zokuvula icala. Njengesu lokuvikela, ummeli wakho ovikela ubugebengu angacela inkantolo ukuthi ichithe amacala obugebengu lapho iphoyisa lingazange lilandele izinqubo ezifanele ngesikhathi likubopha noma ngenkathi liphenya icala. Isibonelo, izimo lapho isikhulu senza ukusesha okungekho emthethweni noma ukushaqa impahla, phakathi kokunye ukwephulwa kwemithetho.
3. Iqhinga Elingenacala Njengesu Lokuvikela
Njengesu lokuzivikela, ummeli wokuvikela ubugebengu angalenqaba ngokuphelele icala, ikakhulukazi uma likhona abukho ubufakazi obuzofakazela ummangalelwa unecala ngaphandle kokungabaza. Isu lihlanganisa ukukhombisa ukuntula kofakazi bokuzibonela, ubufakazi buyantula ukuqinisekiswa, ukunikeza irekhodi lamaphoyisa lommangalelwa uma lihlanzekile, kanye nokukhombisa ukuthi ummangalelwa akakwazi ukwenza icala ngaphansi kwezimo. Ngokuvamile, kuhilela ukuveza ummangalelwa njengomuntu omsulwa.
4. Ukuphikisa Ukuthi Ubekwe Icala Ngokungafanele
Ummeli ovikela ubugebengu angaphonsela inselelo ukuthi ngabe ufakazi wokuzibonela ikhonjwe kahle wena njengomuntu owenze ubugebengu, njengezinqubo zokuhlonza isithombe. Ukwengeza, ummeli wokuvikela ubugebengu angaphikisa ngokuthi umshushisi akaqoqanga ubufakazi obanele ukweseka amacala ngokumelene nawe.
5. Ukuphikisa Ubufakazi obumelene Nawe
Abashushisi kumele bethule ubufakazi ukuze baqinisekise ukuthi ummangalelwa unecala. Ummeli ovikela ubugebengu angakwazi ukuphikisa ubufakazi obethulwe umshushisi, kuhlanganisa ukungabaza ukunemba kobufakazi noma ubufakazi bofakazi. Isibonelo lapho ubufakazi bomshushisi bungabonisi ukuthi ummangalelwa wenze icala noma ezinye izimo zinesandla kulokho okwenzekile. Ukuthola nokuhlasela ubufakazi kungenye yamasu ajwayeleke kakhulu abameli bokuvikela ubugebengu. Ukuhlasela ukwethembeka kommangaleli kungaba yindlela ephumelelayo yokugwema ukushushiswa. Uma umangalelwe ngamanga, ummeli wakho noma ummeli wakho angase afune ukufakazela ukuthi ummangaleli unesizathu sokumangalela ngamanga.
6. Ukufakazela ubuwena okuyiphutha
Lokhu kuhlanganisa ukuthola izimo ze ubunikazi obuyiphutha noma abantu okungenzeka benze ubugebengu okukhulunywa ngabo. Uma bekhona izimbobo ecaleni lomshushisi, khona-ke ummeli wakho angase akwazi ukuwadalula ngempumelelo ngokwakha isu lokuhlasela elizwakalayo.
Lelisu lingasetshenziswa uma uphoqwe ukuba unikeze a ukuvuma amanga noma uma ofakazi benikeza uhoxisiwe izitatimende ezimelene nawe. Uma icala labashushisi lincike kulezo zitatimende, bangase bawahoxise lawo macala.
Ukubanjwa kwenzeka lapho isakhamuzi esivamise ukuthobela umthetho senza icala ngenxa ukwesatshiswa, ukuphoqelela, noma ukungasebenzi kahle komthetho. Lokhu kuvame ukuhlanganisa ukutshala ubufakazi obuholela umuntu ekwenzeni ubugebengu ngemva kokuyengwa ukuba akholelwe ukuthi icala liyamukeleka.
Kwezinye izimo, ukuboshwa kungasetshenziswa kumuntu oye waholela ekukholelweni ukuthi ukwenza ubugebengu akwamukeleki kuphela kodwa kufiseleka kakhulu.
9. Ukumangalela Ukuzivikela noma Ukuzithethelela
Ummangalelwa angasho ukuthi wenze ukuzivikela noma ukuvikela omunye umuntu uma:
(1) Benza ubugebengu ukuze bavimbele ukuzilimaza bona noma omunye umuntu; futhi
(2) Inani lamandla asetshenzisiwe lalidingeka futhi linengqondo.
Ukwengeza, abamangalelwa bangasebenzisa futhi izizathu zokuzivikela njengokuvimbela ukugqekezwa, ukuvikela impahla, noma ukuvikela abanye.
10. Ukuncenga Unecala Kodwa Ucela Ububele
Kwezinye izimo, kungase kumzuzise kakhulu ummangalelwa ukuvuma icala, ikakhulukazi lapho kunobufakazi obuqinile obumelene naye. Ngokuvamile, nge-a icala, ummeli wakho wokuvikela ubugebengu angaxoxisana nenkantolo ukuze ikunikeze umusa okuhlanganisa, ukwehliselwa isigwebo noma asule amanye amacala.
11. Amasu Okuvikela Ahlanganisiwe
Abameli bokuvikela ubugebengu bangasebenzisa isu elilodwa noma amaningi kulawa kunoma yiliphi icala lobugebengu. Isibonelo, ezimeni eziningi ezibandakanya ukulimala ngokomzimba komunye umuntu, ummangalelwa ubekwa icala lobugebengu elifana nokuhlukumeza noma ibhethri elibi.
Ummeli wokuvikela ubugebengu onolwazi e-UAE angase akwazi ukwenza amacala ehliselwe ezingeni eliphansi lecala ngokuxoxisana ngecala kanye/noma ngokuphikisa ngokuthi ubungahlosile ukulimaza ummangali osolwayo futhi kwathethelelwa ngokusekelwe ekuzivikeleni kwakho.
12. Ukusebenzisa Amasu Omthetho Ahlukahlukene
Ezimweni eziningi, abameli bokuvikela ubugebengu bazosebenzisa amasu amaningana ezomthetho ukuze bakhe amacala abo futhi bavikele amaklayenti abo. Lokhu kungafaka izici eziyinselelo zomthetho noma izicelo zokufaka izicelo zokuthi amacala ahoxiswe ngenxa yezinto ezifana nokungaziphathi kahle komshushisi.
Uma icala lakho liqulwa, ummeli wakho angase futhi asebenzise amasu afana nokubiza ofakazi bomlingisi ukuze bafakaze egameni lakho noma enze ijaji libone isimo ngokombono wakho. Ummeli wakho angase acabange ngisho nokusebenzisa ukuzivikela ngobuhlanya noma olunye uhlobo lokuzivikela njengoba kudingekile futhi kufanele.
Ukuncoma Isu Lokuvikela
Kubalulekile ukusungula isu elihle lokuzivikela lapho ubhekene namacala obugebengu ukuze ubhekane nanoma yikuphi ukutholwa kusenesikhathi okungaba muncu kamuva. Ukuchayeka emphakathini, amaphoyisa, izinkantolo kanye nabezindaba kungabangela umonakalo ongenakulungiswa esithombeni sommangalelwa. Ukulawulwa kwezinhlekelele, ikakhulukazi ngesikhathi izigaba zokuqala zobugebengu iyisu elimangalisayo lokuzivikela.
Sishayele manje ukuze uthole Ukuqokwa Okuphuthumayo Nomhlangano ku- +971506531334 +971558018669